2014 | Empty Hand
Empty Hand No comments
Facebook v 11.0.0.0.20 ​လေ၇လိုတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​.software​တွေမတင်​ဖြစ်​တာအ​တော်​ကိုကြာခဲ့ပြိး မအားတာတမျိုး။လိုင်းမရှိ​တော့တာမို့လို့လည်းတင်​ဘို့အခက်​အခဲဖြစ်​ခဲ့၇တယ်​.လိုချင်​သူယူနိုင်​ပါတယ်​.
Posted via Blogaway http://www.mediafire.com/?0hjtj1u8fh3vu4s
Facebook v 10.0.0.0.8 apk
empty hand android applications No comments
Facebook 10.0.0.0.8's Description
Facebook v 9.0.0.0.15 apk
Facebook v 9.0.0.0.15 Description
Empty Hand ebook No comments
ဒီစာအုပ်လေးတွေမှာတော့ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်သမျှအားလုံး စုံစုံလင်လင်ပါဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းအကြောင်းကိုလေ့ လာနေသူတွေ ၊ ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Show Box v 2.5 apk
facebook v 8.0.0.0.4 apk
facebook v 8.0.0.0.4 နောက်ဆုံးထွက်လေးပါ ။ အရင်version တွေမှာ photo comment ပေးလို့ရပေမယ့် share မရပါဘူး။ ဒီ version မှာတော့ share လို့ရပါတယ်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီ ထုတ်ထားခြင်းပါ။နောက်ဆုံး version ကိုမှသုံးချင်သူများအတွက်ပါ။ လိုချင်ရင် အောက်မှာယူလိုက်ပါနော်။။။။။
Camera360 Ultimate v5.0 beta1 apk
More for Camera360, please
facebook v8.0.0.0.1 apk
facebook v 8.0.0.0.1 apk လေပါ ။ အသစ်ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ v 7.0.0.0.27 နဲ့မတူ ထူးခြားလာပါတယ်။ movics player ကို မိမိ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြိး ကြည်လို့ရလာပါတယ်။ download လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ apk ကို install လုပ်ပြိး movics player နဲ့ ချက်ချင်းကြည့်မရရင် တအောင့်လောက်စောင့်ပေးပါ။ ရလာပါလိမ်မယ်။။ Download Here
Clone Camera v 2.0.3 apk
clone camera v 2.0.3 လေပါ။ ကိုယ်ပွား ဓါတ်ပုံရိုက်လိုသူများအတွက်အတော်ဘဲအသုံးဝင်ပါတယ်။အမြင်တမျိုးလေး ဆန်တာပေါ့နော်။ လိုချင်တဲ့သူများ ယူနိင်ပါတယ်ဗျာ......
1. Refined buttons and text.
V ROOT V 1.7.5
Empty Hand Computer Softwares No comments
Version : V 1.7.5
Date : 14.2.2014
လိုအပ်ပါက.... Download Here
viber 4.2.1.1 apk
Viber v 4.2.1.1. apk လေပါ နောက်ဆုံးထွက်လေမို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ android phone အတွက်ပါ။ လိုချင်ရင် အောက်မှာယူလိုက်နော်။။။
facebook v7.0.0.0.27 apk
facebook v7.0.0.0.27 apk လေပါ။ တမျိုးလေဆန်းသလိုဘဲ။နောက်ဆုံးversion လေပါ။ စမ်းချင်ရင်အောက်မှာယူလိုက်ပါနော်.........Download Here
ချစ်သူများနေ့အတွက် လက်ဆောင် Romantic HD Wallpaper For PC
လာမယ့် 14ရက်နေ့ Valentine Day မှာ ချစ်သူစုံတွဲများအတွက် အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတစ်ခုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။
minimal flat icon apk လေပါ ။ HD Icons လှလှလေးကိုမှသုံးချင်သူများအတွက်အသုံးတဲ့မှာပါ ။သွတ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေပါ ။launcher support လည်းတော်တော်များများ အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။
်facebook v 7.0.0.0.23 apk
facebook v 7.0.0.0.23 apk လေ ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုချင်သူများ ယူနိူင်ပါတယ်
Avast Internet Security 8.0.1488.286-P2P(license until 2050)
Avast! Antivirus software provides complete virus protection for your computer. Antivirus engine is complemented by anti-spyware, firewall and antispam modules to protect you against phishing schemes, identity theft and internet-distributed web viruses.
★★Nero 2014 Platinum 15.0.07700 Final + Keygen (279Mb)★★
✔Frozen Keyboards ကာလာစုံ apk✔
Download Here✔Frozen Keyboard ကာလာစုံ Apk✔
-frozen ကီးဘုတ်​ကို ကာလာအ​ရောင်​စုံ သုံးချင်​သူများအတွက်​ zip file ​လေးလုပ်​ပြီး တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​-
★★Anomaly Warzone Earth HD Apk + Data 1.18 Full Version★★
စစ်အက်ရှင်ဂိမ်းတွေကိုကစားရတာကြိုက်တဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက် New Update Version လေးဖြစ်တဲ့
Anomaly Warzone Earth HD လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Apk + Data ကတော့ 151Mb ရှိပါတယ်။
★★Kaspersky Virus Removal Tool 11.0.1.1245 (05.02.2014)Final★★
Kaspersky Virus Removal Tool အသစ်လေးထွက်လာပါပြီ။မိမိကွန်ပြူတာရဲ့ viruses, Trojans, worms, spyware and adware, အစရှိသည်တို့ရဲ့ရန်မှကာကွယ်နိုင် Kaspersky ဆောင်တတ်သော
သူငယ်ချင်းများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။Final Version လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 125Mb ရှိ
မလေးရှားက မြန်မာတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် မလေးဘာသာပြန် APK လေးလာပါပြီ
မလေးရှား - မြန်မာ အိပ်ဆောင် အဘိဓါန်လေးကို ကျော်ဇင်ဟိန်းမှ ဖန်တီးပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်
SmadAV 9.6 full version
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ.ကျွန်တော်တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ SmadAV ဆိုတဲ့ သေးသေးလေးနဲ. အလုပ် တွေအများကြီးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ မယုံကြည်နိုင်စရာ Anti Virus ကောင်းလေးပါ ဒီကောင်လေးကို သိနေတာတော့ကြာပါပြီ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသုံးဖူးသေးလို.
facebook v7.0.0.0.20 apk
facebook v7.0.0.0.20 apk နောက်ဆုံးထွက်လေမို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံuးpdateကိုမှသုံးချင်သူများအတွက်ပါနော်။သွက်လပ်ပေါ့ပါးလာပါတယ်။ တနေ့ထက်တနေ့စမ်းသပ်ပြင်ဆင်ပြိးထုတ်တာမို့အပြစ်ပြောစရာတော့သိပ်မရှိပါဘူး။အရင်version တွေနဲ့မတူပါဘူး။movies တွေကို player အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။
facebook v7.0.0.0.16 apk
facebook v7.0.0.0.16apk နောက်ဆုံးထွက်လေမို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံuးpdateကိုမှသုံးချင်သူများအတွက်ပါနော်။သွက်လပ်ပေါ့ပါးလာပါတယ်။ တနေ့ထက်တနေ့စမ်းသပ်ပြင်ဆင်ပြိးထုတ်တာမို့အပြစ်ပြောစရာတော့သိပ်မရှိပါဘူး။အရင်version တွေနဲ့မတူပါဘူး။movies တွေကို player အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။
ပို့သူမသိအောင် Email ပို့နည်း
အိုင်တီ မုဆိုး Google Hacking No comments
အများကြီး အသုံးတဲ့ပါတယ် ..
ဒီနည်းကိုအသုံးပြုပြီး email ပို့မယ်ဆိုရင်
ဘယ်ကပို့ခဲ့တဲ့ email မှန်းလည်း လုံးဝမသိနိုင်သလို
ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ အမည်၊ email တွေကို စိတ်ကြိုက်လည်း ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ...
facebook v 7.0.0.0.8 apk
facebook v7.0.0.0.8 apk လေပါ ။နောက်ထပ် ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။အများကြီးမပြောတော့ဘူး။ လိုချင်တဲ့သူများအတွက်ပါ......
facebook v7.0.0.0.15 apk
facebook v7.0.0.0.15apk နောက်ဆုံးထွက်လေမို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံuးpdateကိုမှသုံးချင်သူများအတွက်ပါနော်။သွက်လပ်ပေါ့ပါးလာပါတယ်။ တနေ့ထက်တနေ့စမ်းသပ်ပြင်ဆင်ပြိးထုတ်တာမို့အပြစ်ပြောစရာတော့သိပ်မရှိပါဘူး။
Messenger 3.3.1 release apk
Messenger 3.3.1 release apk လေးပါ။ update ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။messenger အတွက်အထူးပြောဘို့လိုမယ်
Computer ထဲက Facebook Password ကို ကြည့်မယ်
အိုင်တီ မုဆိုး Computer Softwares No comments
ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် တင်ပေးလိုက်သလဲဆိုတော့
အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ Facebook သုံးနေတဲ့
ဒီဆော့ဝဲလေးကို စမ်းသုံးကြည့်ပြီးရင် Browser ထဲမှာ ၀င်သုံးထားတဲ့ အကောင့်တစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်အထိလုံခြုံမှု အားနည်းတယ်ဆိုတာကို သိပြီး ရှင်းလင်းစရာရှိတာတွေကို
သတိတရနဲ့ ရှင်းလင်းထားခဲ့ဖို့ မမေ့စေချင်လို့ပါ ..
Empty Hand apk
အနော်ရဲ့ bloger လေးကို apk လေအဖြစ်လုပ်ထားပါတယ်။ မလုပ်တက်လုပ်တက် လုပ်ထားတာပါ
facebook v7.0.0.0.13 apk
facebook v7.0.0.0.13 apk နောက်ဆုံးထွက်လေမို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံuးpdateကိုမှသုံးချင်သူများအတွက်ပါနော်။သွက်လပ်ပေါ့ပါးလာပါတယ်။ တနေ့ထက်တနေ့စမ်းသပ်ပြင်ဆင်ပြိးထုတ်တာမို့အပြစ်ပြောစရာတော့သိပ်မရှိပါဘူး။ လိုချင်တဲ့သူများယူနိုင်ပါတယ်။
Description====Keeping up with friends is faster than ever. See what friends are up to---Share updates photos and videos---
Camera360 Ultimate v 4.8.6 apk
camera360 ultimate apkလေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးပြောဘို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး ။နောက်ဆုံuးpdateလေ ထွက်လားလို့တင်လိုက်တာပါ။version 4.8.6
B4A Full Version ( Android Application ရေးတဲ့ဆော့ဝဲ )
Android Application တွေကို
ဆော့ဝဲရဲ့ နံမည်ကတော့ Basic4Android ပါ
B4A လို့ လူသိများပါတယ် ..
Pinger ကို Code မရောက်တဲ့ Facebook Friend တွေအတွက်
အိုင်တီ မုဆိုး Facebook No comments
Pinger ဖုန်းနံပါတ်ကို သုံးပြီး
ဒီပို့စ်လေး မှာ ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ
Facebook က ပို့လိုက်တဲ့ ကုဒ်ဟာ
Pinger ထဲကို ရောက်မလာဘူးဆိုတဲ့
Reply တွေ ကျွန်တော့ mail ထဲကို
ပို့ပြီး မေးမြန်းလာကြပါတယ် ..
ဒါကြောင့်ဒီပို့စ်လေးမှာတော့ အဲဒီလို ပြဿနာမျိုးဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းပြီး
ကုဒ်ရောက်လာအောင် လုပ်သလဲဆိုတာကို ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ လုပ်ပြထားပါတယ်
TubeMate 2.1.0 apk
TubeMate YouTube Downloader လေထွက်တာတော့ကြာနေပါပြိး settingမှာမြန်မာလိုလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ် ။
facebook v 7.0.0.0.1 apk
facebook v7.0.0.0.1 apk နောက်ဆုံးထွက်လေမို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
တောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ..
အနှစ်သက်ဆုံးနဲ့ လက်ရှိလည်း အသုံးပြုနေတဲ့
လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအလွန်ကို မြင့်မားတာကို တွေ့ရပါတယ်
ဒီဆော့ဝဲလေးကို သုံးပြီး ကွန်ပျူတာ Screen ပေါ်က
လော့ကျနေသော Facebook အကောင့်ပြန်ယူနည်း (2)
Lock ကျတတ်တာကို Facebook အသုံးပြုနေသူ
ပြန်ယူနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကို ဒီပို့စ် မှာ တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်
ဒီဘလော့လေးသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရား၏ အရိပ်အောက်တွင်ရှိသောကြောင့် ရောက်လာသူအပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်မာ ရွှင်လန်း ကြပါစေ။.......:)
Facebook 10.0.0.0.8's Description Keeping up with friends is faster than ever. • See what friends are up to • Share updates, photos an...
Movies and TV-shows for free! Amazing collection of Movies and TV-shows. Absolutely free. You can download them on your Android dev...
facebook v6.0.0.0.27 apk
facebook v 6.0.0.0.27 apk နောက်ဆုံးထွက်လေမို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံuးpdateကိုမှသုံးချင်သူများအတွက်ပါနော်။သွက်လပ်ပေါ့ပါးလာပါတယ်။ တနေ့ထက...
facebook v 8.0.0.0.4 နောက်ဆုံးထွက်လေးပါ ။ အရင်version တွေမှာ photo comment ပေးလို့ရပေမယ့် share မရပါဘူး။ ဒီ version မှာတော့ share လို့ရပါတ...
Facebook v 9.0.0.0.15 Description Keeping up with friends is faster than ever. • See what friends are up to • Share updates, photos and vi...
android applications (32)
Computer Softwares (11)
ချစ်သူများနေ့အတွက် လက်ဆောင် Romantic HD Wallpaper ...
★★Nero 2014 Platinum 15.0.07700 Final + Keygen (27...
★★Anomaly Warzone Earth HD Apk + Data 1.18 Full Ve...
★★Kaspersky Virus Removal Tool 11.0.1.1245 (05.02....
B4A Full Version ( Android Application ရေးတဲ့ဆော့ဝ...
Pinger ကို Code မရောက်တဲ့ Facebook Friend တွေအတွက်...
Copyright @ 2013 Empty Hand .